सावधान ! ‘फेसएप’ प्रयोग गर्नु खतरनाक छ | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more सावधान ! ‘फेसएप’ प्रयोग गर्नु खतरनाक छ
बिबिसी । अहिले सोसल मिडियामा एउटा एपको प्रयोग गरी आफुलाई बुढो देखाउने होडबाजी नै चलिरहेको छ । विश्वभर नै फेस एपले तहल्का मच्चाइरहेको छ । सोसल मिडियामा फेसएपका तस्वीर अन्धाधुन्ध पोष्ट भैरहेका छन् । यो एपले कुनैपनि व्यक्तिको तस्वीरलाई कृत्रिम तरिकाले बुढो मानिसको अनुहारको रुपमा बदलिदिन्छ ।
म बुढो हुँदा कस्तो हुँला ? भन्ने उत्सुकता सबै तन्नेरीहरुमा हुनु अस्वभाविक होइन । त्यसैले सोसल मिडियामा युवायुवती हरुले फेसएपले बुढो बनाएको आफ्नो अनुहार पोष्ट गरिरहेका छन् । तर तपाइँ आफ्नो बुढोपनाको तस्वीर पोष्ट गरिरहँदा जति रोमाञ्चित भैरहनुभएको छ त्यसले तपाइँलाई खतरामा पनि धकेलिरहेको हुन्छ । किनकी यो एप प्रयोग गर्दा साइबर सुरक्षामा खतरा पैदा हुने देखिएको छ ।
फेसएपलाई लिएर अमेरिकी सिनेटमा पनि आवाज उठेको छ र सिनेटरहरुले यो एपमाथि छानविन गर्न माग गरेका छन् । सिनेटमा अल्पसंख्यक नेता चक शुमरले फेसएपमाथि छानविन गर्न माग गरेका हुन् । ट्वीटरमा पोष्ट गरिएको एक पत्रमा शुमरले लेखेका छन्, ‘यो निकै चिन्ताजनक छ । अमेरिकी नागरिकको निजी डाटा विदेशी शक्तिहरुले प्राप्त गरिरहेका छन् ।’
तर फेसएपले भने यस्ता आरोप अस्विकार गरेको छ । रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गस्थित वायरलेस ल्याब कम्पनीले उक्त एप विकास गरेको हो । यो एपमार्फत लिइने तस्वीरहरु स्थायी रुपले संग्रहित नगरिने र प्रयोगकर्ताका व्यक्तिगत डाटाहरु कुनै पनि चोरी नगरिएको कम्पनीको भनाई छ । प्रयोगकर्ता आफैले छानेका तस्वीरमा एपमार्फत केवल एडिटिङ्ग मात्र गर्ने गरिएको जिकिर उसको छ ।
सन् २०२० को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावलाई प्रभावित गर्न समेत यो एपको दुरुपयोग हुनसक्ने तर्फ डेमोक्रेटिक नेशनल कमिटीले चेतावनी दिएको परिप्रेक्ष्यमा शुमरले उक्त एपमाथि छानविनको माग गरेका हुन् । विज्ञहरुका अनुसार यो एपले साइबर सुरक्षामा कत्तिको खतरा पैदा गरेको छ भन्ने त अझै खुलेको छैन, तर यो एप प्रयोग नगर्नु नै फाइदाजनक हुन्छ ।
तथापि अहिले विश्वमा ८ करोड भन्दा धेरैले यो एप प्रयोग गरिसकेका छन् । यसअघि सन् २०१७ मा फेसएप निकै विवादमा आएको थियो । त्यतिबेला उक्त एपले प्रयोगकर्ताको नश्ललाई नै एडिट गर्ने फिचर राखेको थियो । निकै आलोचना भएसँगै कम्पनीले फेसएपबाट उक्त फिचर हटाउँदै माफी समेत मागेको थियो ।
साउन ३ गते, २०७६ - १३:११ मा प्रकाशित